ေဗဒင္ Archives - Celegroup
20.8.2021 မှ 26.8.2021 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း
August 20, 2021 cele group 0
20.8.2021 မှ 26.8.2021 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်း အခွင့်အရေး နှစ်မျိုးနှစ်ခွ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိမိစိတ်က လုပ်ချင်နေတဲ့ ကိစ္စတွေ ကိုတော့ အထူးဦးစားပေးလုပ်ကိုင်ပါ။ ခရီးကိစ္စများလဲ အထူးတိုးတတ်ပါလိမ့်မယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ အထူးတိုး တတ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတစ်ပါးတွေရဲ့ အကူအညီ အထောက်အပံ့တွေ အများကြီး ရလာတတ်ပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာမှု တွေကို ဦးစားပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အိမ်အတွင်း လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်လဲ […]
သူနဲ႔ညားခဲ့ရင္ အဆင္ေျပႏိုင္၊မေျပႏိုင္ တြက္ၾကည့္ႏိုင္တဲ့နည္း….
သူနဲ႔ညားခဲ့ရင္ အဆင္ေျပႏိုင္၊မေျပႏိုင္ တြက္ၾကည့္ႏိုင္တဲ့နည္း…. ကိုယ္နဲ႔ သူနဲ႔ ဖူးစာကံ ပါမပါ၊ ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုခ်စ္ျခင္းမ်ိဳးနဲ႔ လက္တြဲသြားၾကမယ္ဆိုတာကို လြယ္လြယ္ေလးတြက္ၿပီး သိျမင္နိင္တဲ့ ေဗဒင္တြက္နည္းေလး ျဖစ္ပါတယ္ …။ ခ်စ္သူေမြးေန႔သကၠရာဇ္ အားလုံးေပါင္းၾကည့္ ၊ ေနာက္ဆုံး ရလာတဲ့ကိန္းတစ္လုံးက အေျဖေပါ့ …။ ဥပမာ တစ္ခုအေနနဲ႔ ၾကည့္ၾကရေအာင္ …။ သင္က 23.4.1991 သင့္ ခ်စ္သူက 14.7.1992 ဆိုပါစို႔ …။ သင့္ေမြးေန႔ + […]
ကျား/မ အားလုံးတို့၏ အကြိုအကြားနေရာတွေပါမကျန် နေရာစုံပါတဲ့ မှဲ့ ဟောကိန်း….
August 13, 2021 cele group 0
ကျား/မ အားလုံးတို့၏ အကြိုအကြားနေရာတွေပါမကျန် နေရာစုံပါတဲ့ မှဲ့ ဟောကိန်း…. မှဲ့တည်နေရာနှင့် အဟောတွေပါ… လူတိုင်းမှာ မှဲ့ရှိတတ်တာမို့ ကျား/မ အားလုံး (ဗဟုသုတရအောင် တင်ပေးတာပါ) ဗဟုသုတအနေနဲ့မျှဝေတာပါ။ အမှန်ကြီးပဲလို့မပြောနိုင်သလို၊ အမှားတွေပါလို့လဲမဆိုသာပါဘူး။ ကိုယ့်မှာ ပါတာလေးတွေနဲ့ တိုက်ကြည်ပေါ့။ ကြိုက်လျှင်ယူ၊ မကြိုက်လျှင် ပယ်လိုက်ပါ။ ယောကျ်ားတို့၏ မှဲ့ တည်နေရာနှင့် အဟော…. ( ၁ ) နဖူးပြင်တည့်တည့်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်၍ အစွပ်အစွဲခံရတတ်၏။ အပူသောကများလိမ့်မည်။ […]
၇ရက်သားသမီး တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း 12.8.2021 မှ 18.8.2021 အထိ
August 12, 2021 cele group 0
၇ရက်သားသမီး တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း 12.8.2021 မှ 18.8.2021 အထိ တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်းမှာ စိတ်ထဲလိုချင်တာတွေပြည့်ဝလာတတ်ပါတယ်။ မိမိတို့တောင်းဆုတွေပြည့်လာတတ်ပါ တယ်။ ကူညီမဲ့သူ၊မစမဲ့သူတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အကြီးအကဲတွေနဲ့ အချိတ်အဆက်မိမိ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေးမှာတော့ မကျန်းမာသူတွေ၊ ဝေဒနာ ပြင်း ထ န် စွာခံစားရသူတွေ ကောင်းစွာနေပြန်ကောင်းလာတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအထူးစိတ်ပူဖို့မလိုသေးပါဘူး။ အလုပ်ဟောင်းတွေ အလုပ်ပြန်ခေါ်တာမျိုး၊ မိတ်ဆွေဟောင်းတွေနဲ့ပြန်ဆုံပြီး မိမိ အ ခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးသွားတာမျိုးတွေကြုံဆုံရတတ်ပါတယ်။ ဒီကာလတွေမှာ သတိထားရမှာက […]
ကံနိမ့်နေလျှင် ဗေဒင်မေးစရာမလိုပဲ တသက်တာ ယတြာ ချေနည်း
August 5, 2021 cele group 0
တသက်တာ ယတြာချေနည်းလေး ဗေဒင်လက္ခဏာ မေးပြီး ယ တြာ ချေရန်ငွေကြေးအခက် အခဲရှိသူများအတွက်အလွယ်ကူဆုံးတသက်သာ ယတြာ ချေနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မွေးသက္ကရာဇ် ကိုတည်ပါ ရောက်ဆဲ သက္ကရာဇ်ဖြင့်ပေါင်းပါ ပေါင်းရကိန်းကို (၃) နှင့်မြှောက်ပြီး မြှောက်ရကိန်းကို (၇) နှင့်စားပါလေအကြွင်းကို အောက်ပါ လင်္ကာအတိုင် ယတြာချေရန်ဖြစ်ပါသည်။ မီး ၊ ရွှေ ၊ စိုး ၊ ငါး ၊ သံဃာအား ကျွေးငြား ဆွမ်းကိုသာ ၊ […]
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတစ်လစာဟောစာတမ်း…..
August 2, 2021 cele group 0
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတစ်လစာဟောစာတမ်း….. တနင်္ဂနွေသားသမီးများ တနင်္ဂနွေနေ့ သားသမီးများသည် အလုပ်အကိုင်အောင်မြင်မှုနှင့် ကြုံတွေ့မည်။ဆရာကောင်းမိတ်ဆွေများနှင့်ဆုံမည်။ မမျှော်လင့်ထားသောအကူညီများရရှိမည်။ ဤလတွင် အလုပ်နှစ်ခု တစ်ပြိုင်နက်တည်း မလုပ်သင့်ပါ၊ တစ်ပိုင်းတစ်စဖြစ်တတ်သည်။ အပြိုင်အဆိုင် မနာလိုသူပေါများမည်။ ခရီးရှည် ရက်ရှည်ခရီး မထွက်သင့်ပါ။ သူများဦးစီးသောခရီးဝေး မထွက်သင့်ပါ။ အစားအသောက်မှား၍ အစာအဆိပ်သင့်တတ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဝမ်းဗိုက်နှင့်ပတ်သက်၍ အထူးဂရုစိုက်ပါ။ ချစ်သူနှင့်အိမ်ထောင်မရှိသူများ ချစ်သူ ရည်းစားအသစ်ရမည်၊ အိမ်ထောင်သည်များ သားသမီး ရတနာထွန်းကားမည့်လဖြစ်မည်။ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေမည့်လဖြစ်သည်။ […]
မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာ လကၡဏာပညာ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ား
August 1, 2021 cele group 0
မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာ လကၡဏာပညာအခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ား… (A) ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းမွ ဉာဏ္လမ္းေၾကာင္းဆီသို႔ ဦးတည္၍ ဆင္းလာေသာအေရးအေၾကာင္းငယ္တစ္ခုမွာ မိမိမွ တစ္ဘက္သားအေပၚကို ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္စိတ္ဝင္စားမႈရွိျခင္းကို ေဖာ္ျပပါတယ္။ ၎လမ္းေၾကာင္းရွည္လွ်င္ရွည္သေလာက္ မိမိမွ ခ်စ္ခင္စြဲလမ္းမႈပိုပါတယ္။ (B)ဉာဏ်လမ်းေကြာင်းထက်မွ ႏွလုံးလမ်းေကြာင်းဆီသို႔ ဦးတည်၍ တက်လာေသာလမ်းေကြာင်းငယ်တဈခုမွာ တဈဘက်သားမွ မိမိအေပါ်ကို ချစ်ခင်ႏွဈသက်စိတ်ဝင်စားမႈရွိခြင်းက်ိဳ ေဖာ်ပြပါတယ်။ ၎လမ္းေၾကာင္းရွည္လွ်င္ရွည္သေလာက္ တစ္ဘက္သားမွ ခ်စ္ခင္စြဲလမ္းမႈ ပိုပါတယ္။ (C)#ႏွလုံးလမ္းေၾကာင္းမွ ဆင္းလာေသာလမ္းငယ္နဲ႔ ဉာဏ္လမ္းေၾကာင္းမွ တက္လာေသာလမ္းေၾကာင္းငယ္တို႔ ေပါင္းဆုံျခင္း (သို႔) ေက်ာ္လြန္လာျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေနလွ်င္ […]
13.5.2021 မွ 19.5.2021 အထိ ေဟာစာတမ္
May 14, 2021 Celegroup1975 0
13.5.2021 မွ 19.5.2021 အထိ ေဟာစာတမ္း တနဂၤေႏြ မိမိလုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအေျမာက္ျမားစြာ ရရွိဖို႔ၾကဳံေပမယ့္.လက္ထဲေငြသားေရာက္ ဖို႔ ၾကန႔္ၾကာေနလိမ့္မယ္။ မိမိထက္နိမ့္သူတို႔ႏွင့္ လက္တြဲၿပီးအလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရတတ္သည္။ ကုန္သည္ မ်ားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္႐ုံသာျဖစ္ရတတ္သည္။ အေရာင္းအဝယ္ ကိစၥမွ အက်ိဳးအျမတ္ ထူးထူးျခားျခားေမၽွာ္လင့္ လို႔မရနိုင္ေသးပါ။ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားသမားမ်ားလိုခ်င္ေဇာ၊ ရခ်င္ေဇာႏွင့္ ဆုံးျဖတ္မိပါက အမွားအယြင္းပင္ ျဖစ္တတ္ပါ သည္။ လက္လီစီးပြားမ်ားထင္သေလာက္ အဆင္မေျပျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ မိမိအသုံး ျပဳ […]